रोईरहेकी शिल्पाको लागि मध्यरातमा छबिले लेखे यस्तो स्टाटस भन्छन शिल्पा जी .... - हाम्रो देश
१५ माघ २०७७, बिहिवार Thursday, 28 January, 2021
रोईरहेकी शिल्पाको लागि मध्यरातमा छबिले लेखे यस्तो स्टाटस भन्छन शिल्पा जी ….
३१ असार २०७६
काठमाडौं : छवि शिल्पा सम्बन्ध चिसिएको केही दिनपछी शिल्पा एक अन्तरबार्तामा देखिईन । त्यस अन्तरबार्तामा शिल्पा लगभग अन्तरबार्ता भरिनै रोईन । उनले आफ्नो पीडा पोखिन, सुनाईन ।
उनका अनुसार धेरै समय देखि उनले यस्तो पीडा भोगेकी थिईन कि उनी भोलिपल्ट सुटिङ जानुछ भने पनि खाना बनाएर फ्रीजमा राखेर जानुपर्थ्यो । यस झगडामा कुनको कानको जाली फुट्ने गरि हानेको आरोप छवि माथी छ । छवि भने यो कुरालाई स्विकार्दैनन तर शिल्पालाई डाक्टरले केही दिन स्पिकर बजेको स्थान नजिक नबस्न सुझाव दिएका छन ।
निर्माता ओझाको छवी पछिल्लो समय धुमलिएको छ । उनको छवि फिल्मसँग सम्बन्धित विषयले भन्दा पनि घरेलु समस्याका कारण धुमिलिएको हो । यसअघि पनि पटक पटक वैवाहिक जीवनमा धोका बेहोर्दै आएका निर्माता ओझाको चौथो विहे पनि यतिवेला संकटमा परेको छ । यही विषयलाई लिएर छवीले प्रहरीमा गएर शील्पासँग मिलापत्रको कागज समेत गरिसकेका छन् । यद्यपि, मिलापत्र भए पनि छवी र शील्पा यतिवेला सँगै छैनन् । उनीहरु अलग अलग बस्दै आएका छन् ।
यस बिषयमा शिल्पाको अन्तरबार्ता आएको केही समय पछाडि नै छबिले आफ्नो फेसबुक मार्फत शिल्पालाई सम्बोधन गर्दै एउटा लामो सन्देश/स्टाटस लेखेका छन ।
यस्तो छ छवि ओझाले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस :
मैले ५२ बर्षको उमेरमा ३ जना श्रीमती सङ सम्बन्ध बिच्छेद भईसकेपछि तपाईं सङ चाहिँ जिन्दगि बिताउन सक्छु होला भनेर जिन्दगिका सब थोक कम्प्रमाइज गरेर माया गरेर बिहे गरेको श्रीमती हो तपाईं l छातिमा हात राखेर आज एक्छिनलाई आफैलाई नढाटी सम्झनुस तपाइले लगाएका कति आरोपहरु सत्य छन ? यदि तपाईं पनि आफुलाइ सच्याएर अझै मेरो श्रीमती, तपाइले बिहे गर्ने बेलामा आस्वासन दिलाए जस्तै मेरो बुढेसकालको सहारा बनेर बस्न सक्नुहुन्छ भने, म पनि मेरा कमि कमजोरीहरु सच्याएर गान्धीबादी भएर बस्न सक्छु ।
अरुको कुरा नसुन्नुस, आउनुस हाम्रो घरको ढोका सधै तपाईंको लागि खुल्ला छ । हैन र यदि तपाइ साच्चै म सङ बस्न सक्नु हुन्न भने पनि एक पटक म सङै आएर टेबलमा कुरा गर्नुस । मेरो ईतिहास पल्टाएर हेर्नुस आज सम्म मैले कुनै पनि श्रीमतिलाई अन्यायमा पारेको छैन । तपाइलाइ पनि पार्दिन । मैले बिगत ३ दिन देखि तपाइलाइ सम्पर्क गरेर भेट्न खोज्दा पनि तपाइलाई अब मेरो वकिलले भेट्छ भन्नू भयो । म फेरि पनि भन्दैछु, सन्सारको कुनै पनि अदालतमा जानू पर्दैन । छबी ओझाको अदालतमा सिधै आउनुस । तपाइले न्याय पाउनु हुन्छ ।
ऋतिकको जन्मदिनमा पूर्व श्रीमती सुजैनको विशेष मेसेज, सेयर गरिन् नयाँ…
७८ वर्षीय अमिताभ बच्चन माइनस ३३ डिग्रीको चिसोमा !